Vol. 12 DECEMBER, 1910. Nha. 3
NEKUTI nepfungwa dzevanhu uko kunobuda zvakasikwa uye pasina kuedza kufunga kwenzvimbo yeramangwana kana mamiriro emufaro. Pfungwa yakataurwa zvakasiyana siyana. MuChirungu rinoshandurwa nenzira yeshoko rdenga.
Zvidhori zvinowanikwa mumadhiguru uye nzvimbo dzekuviga zveva prehistoric vagari veAmerica vanopupurira kufunga kwavo kwekudenga. Zvivakwa, matembere uye zvakanyorwa pane simbi nedombo mumatongo ehunyanzvi hwekare muAmerica zvinopupurira kudenga, nevavaki vebudiriro idzodzo. Vanatenzi venzvimbo yeNire vakarera maeelis, mapiramidhi nemakuva, uye akavasiya vakanyarara, zvapupu zvakavezwa zvichizivisa ramangwana remufaro remunhu. Madzinza eAsia anopa hupfumi hwehuchapupu mumapako uye munzvimbo dzenzvimbo, uye bhuku rinowanza nekutsanangurwa kweramangwana rekunakidzwa kwemunhu semhedzisiro yemabasa ake akanaka pasi pano. Pamberi pekutanga kunongedzera zvinongedzo zvezvitendero zvechiKristu zvisati zvasimudzwa pamusoro pevhu reEurope, matombo ematombo nematombo nemakristuru akashandiswa nemunhu kuunza makomborero edenga paari achiri pasi pano, uye kumuita kuti apinde munzvimbo inofadza yedenga mushure rufu. Nenzira yechinyakare kana kuti shoma, kana nekureruka kana kuwanda kwetsika, dzinza rega rega rakaratidza kutenda kwaro mune ramangwana mamiriro edenga.
Rudzi rwese rune zvirevo zvadzo uye ngano dzinotaurira munzira yavo yenzvimbo kana mamiriro ezvinhu asina mhaka, umo mujaho waigara uchifara. Muchiitiko ichi chepakutanga ivo vakapiwa kuvepo neyemusiki aive pamusoro pavo wavakatarisa nekutya kana kutya kana nekuremekedza uye ivo vavaiona sa tenzi wavo, mutongi kana sababa, nekuvimbika kwevana. Nhoroondo idzi dzinoti mitemo yakapihwa nemusiki kana kuti munhu wepamusoro, kuitira kuti pakurarama maererano neizvi, nhangemutange inofanirwa kuramba ichirarama mumamiriro avo emufaro, asi izvo zvakakonzera miganho inouya kubva kuhupenyu hwakatarwa. Imwe neimwe nyaya inotaurira nenzira yayo yekusateera kwerudzi kana rwevanhu, uyezve nematambudziko, nenjodzi, nenjodzi, nemarwadzo nemisodzi zvichikonzerwa nekusaziva nekusateerera kwemadzitateguru.
Ngano uye ngano uye rugwaro zvinoti kuti madzinza evanhu anofanira kurarama muchivi uye neshungu, akarwara nechirwere uye anotambudzwa neukweguru hunopera murufu, nekuda kweiyo zvivi zvekare zvemadzitateguru. Asi chinyorwa choga choga munzira yayo, uye nehunhu hwevanhu chakaitwa nahwo, dzinofanotaura nezvenguva iyo nenyasha dzemusiki kana nekudzikisira kwezvakaipa zvakaitwa, varume vachapunyuka hope dzehupenyu hwepanyika vopinda mukati inzvimbo iyo painorwadziwa nekutambura nechirwere nerufu zvisipo, uye panopinda vese vanogara muhupenyu husina mutsigo uye husina kuvimbika. Ichi chivimbiso chedenga.
Ngano uye ngano inotaurira uye rugwaro zvinorongedza mararamiro kuti munhu anofanira kurarama uye sei uye zvaachaita asati awana kuwana kana kumuudza hunhu hwekudenga. Inokodzera kuhupenyu nehunhu hwedzinza rake, munhu anoudzwa kuti achawana kudenga nenyasha dzaMwari kana kuzviwanira nemabasa ane hunyanzvi muhondo, nekukunda muvengi, nekukunda ivo vasina hukama, nehupenyu hwekutsanya, hwekugara, kutenda munamato kana kutendeuka, nemabasa erudo, nekudzikamisa matambudziko evamwe, nekuzvidzikisira uye nehupenyu hwekushumirwa, nekunzwisisa nekukunda uye kudzora kwekuda kwake zvisina kukodzera kuda kwemukati, maitiro uye maitiro, nemafungiro akanaka, zviito zvakanaka uye Kuziva, uye kuti kudenga kumusoro kune kana pamusoro pepasi kana kuve pasi pane imwe nguva yemberi.
Zvitendero zvechiKristu zvine chekuita nemamiriro epakutanga uye emunguva yemberi akasiyana zvishoma kubva kuneedzedzimwe dzidziso zvekare zvekare. Sekureva kwekudzidzisa kwechiKristu munhu anozvarwa uye achigara muchivi, uye zvinonzi chirango chechivi rufu, asi anogona kupukunyuka rufu uye nezvimwe zvirango zvezvivi nekutenda muMwanakomana waMwari soMuponesi wake.
Zvinotaurwa muTestamente Itsva nezve kudenga ndezvechokwadi uye zvakanaka. Zvirevo zvebhaibheri nezve kudenga rezvidzidzo zvouMwari zvakawandisa zvekusanzwisisika, zvinopesana uye zvipfupi-zvakaonekwa zvisina musoro. Ivo vanodzingira pfungwa uye vanogonesa pfungwa. Denga rezvidzidzo zvouMwari inzvimbo yakavhenekerwa nemwenje inopenya, uye yakashongedzwa kwazvo uye yakashongedzwa nezvinhu zvepasi zvinodhura; iyo nzvimbo iyo nziyo dzokurumbidza dzinoimbwa nekusingaperi kumarara emimhanzi; apo migwagwa inoyerera mukaka neuchi uye uye pane zvekudya zvekunze zvinowedzera; ipo pamhepo pakatakura nekunhuhwirira kwezvinonhuhwirira zvakanaka nezvinonhuwira zvemafuta; uko mufaro uye kunakidzwa kupindura kubata kwega kwega uye uko vasungwa kana pfungwa dzevanhu dzinoimba nekutamba uye dzinonakidzwa uye dzinonakidza kune hosannas yemunamato nekurumbidza, mukusingaperi kusingaperi.
Ndiani anoda denga rakadai? Ndeupi murume anofunga aigona kugamuchira yakadzika kudaro, inoshamisira, denga kana ikakandwa pamusoro pake? Mweya wemunhu unofanira kunge wakaita sebenzi, hove jelly kana mummy, kutsungirira chero zvisina tsvina zvakadaro. Hapana munhu anoda zvedenga reruzivo mazuva ano uye hapana akaderera pane wezvebhaibheri, anozviparidza. Anoda kugara pano pasi rakatukwa pane kuenda kudenga iro rine mbiri iro raakaronga nekuvaka nekupa mudenga riri kure.
Denga chii? Izvo hazviiti kana kuti zviripo? Kana zvisingaite, saka wadii kupambadza nguva mukunyepedzera nezvakaipa zvakadaro zvisina basa? Kana ichiripo uye yakakodzera nguva, saka zvakanaka kuti munhu azvinzwisise uye azvishandire.
Pfungwa dzinoshuvira mufaro uye rinotarisira kunzvimbo kana nyika kunowanikwa mufaro. Nzvimbo iyi kana dunhu rinoratidzwa mune izwi rekuti kudenga. Chokwadi chekuti madzinza ese evanhu akafungisisa uye akatenda mune imwe nhambo yedenga, chokwadi chekuti vese vanoramba vachifunga uye kutarisira kudenga, chiratidzo chekuti mune chimwe chinhu mupfungwa chinogombedzera pfungwa, uye kuti ichi chimwe chinhu chinofanirwa kunge chakafanana mune icho kune icho chinosimudzira, uye kuti chichaenderera mberi nekumanikidza uye kutungamira kufunga kune chakakodzera kusvika icho chinangwa chakanakisa chasvika uye chazadziswa.
Kune simba rakakura mukufunga. Nekufunga uye kutarisira tarisa kudenga mushure mekufa, munhu anounganidza simba uye anovaka maererano neyakafanira. Simba iri rinofanira kuve nekutaura kwaro. Hupenyu chaihwo hwepasi pano haupi mukana wekutaura kwakadaro. Idzo pfungwa uye tarisiro dzinowana kutaura kwavo mushure mekufa kudenga kudenga.
Pfungwa ndedzemutorwa kubva kunzvimbo inofara, nyika yepfungwa, uko kusuwa, kukakavara uye kurwara hazvizivikanwe. Achisvika pamhenderekedzo yepasirese inoyemurika yepanyika, mushanyi anokanganiswa, kunyengedzwa, kushamisika nekukanganiswa, kunyeperwa uye kunyengera kwemafomu uye mavara uye manzwiro. Kukanganwa mamiriro ake omufaro uye kutsvaga mufaro kuburikidza nemanzwiro ari muzvinhu zvekunzwa, iye anokwenenzvera nekunetseka uye zvinoshungurudza kuwana pakusvika pazvinhu, kuti mufaro haapo. Mushure mekugara kwenhaurwa uye kubvumirana, kwenyonganiso, kubudirira pamwe nekuodzwa moyo, mushure mekungwara kubva mukurwadziwa uye kuzorodzwa nemufaro wepasirese, muenzi anoenda kubva kunyikadzimu uye anodzokera kunzvimbo yake yekuzvarwa inofara, achitora chiitiko naye.
Pfungwa dzinouya zvakare uye dzichirarama uye dzinopfuura kubva kune dzepanyama zvadzinoenda kwadziri, nyika yepfungwa. Pfungwa dzinozofamba-famba dzinofamba-famba dzinowanzoshanyira, asi dzisati dzambonzwika zvakadzika kana kugadzirisa matambudziko ehupenyu hwepanyika. Munhu anga aine ruzivo rwakawanda nemari shoma. Anouya achibva kumba kwake kusingaperi kuti agare zuva munyika, obva apfuurira zvakare kunozorora, chete kuti auye zvakare. Izvi zvinoenderera mberi kusvikira azviwanira mukati make, mununuri wake, uchavhima mhuka dzesango, dzinomusvipira iye, nekuparadza kunyengera kwakamuwira, iye unomutungamidza nemafaro erinotyisa mukati menyika rakavhunduka renyika nepadenga. kwaanenge achizviziva, asingabatwe nemanzwiro uye asina kukanganiswa nezvido kana miedzo uye asingabatwe kumhedzisiro yechiitwa. Kusvikira awana mununuri wake uye aziva nzvimbo yake yekuchengetedza munhu anogona kutarisira kudenga, asi haazozviziva kana kupinda kudenga iye achifanirwa kuuya asingazive kune venyama.
Pfungwa hadziwane zvakakosha zvedenga pasi pano, uye hazvitomboita kwenguva pfupi zvichinyatsoenderana nezvakakomberedza uye nemanzwiro azvo uye nemanzwiro uye zvinonzwika zviripo. Kusvikira pfungwa dzave kuziva uye tenzi wea ese aya, hazvigone kuziva denga repasi. Saka pfungwa dzinofanira kusunungurwa nerufu kubva kune venyama, kuti vapinde mumamiriro emufaro semubairo wavo, kuti vararame zvinoenderana neizvo izvo zvaakatarisira kumberi, uye vasunungurwe kubva mukutambudzika kwakatsungirira, uyezve miedzo iyo yaakatamburira nayo, uye kuti unakirwe nezvakanaka zvavakaita uye nekubatana kwakaringana kwavakashuwira.
Mushure mekufa havasi vese varume vanopinda kudenga. Ivo varume vane kufunga uye basa rakapedzerwa pazvinhu zvehupenyu hwenyama, vasingatombozvifunga kana kuzvinetsa nezveramangwana remunhu mushure mekufa, vasina zvinangwa zvekunakirwa nekunakidzwa kwebasa kana basa, vasina pfungwa kana kushuva kune huMwari pamusoro kana mukati mavo, ivo varume havazove nedenga kana vafa. Dzimwe dzepfungwa dzekirasi ino, asi vasiri vavengi kuvanhu, vanoramba vari mune yepakati pakati pehope huru, kusvikira miviri yenyama yakagadzirwazve uye yakavagadzirira; vanobva vapinda pakuzvarwa mune izvi uye mushure mezvezvo vanoenderera mberi nehupenyu nebasa sekuda kwehupenyu hwavo hwekare.
Kupinda kudenga, munhu anofanira kufunga nezvazvo uye kuita izvo zvinoita kudenga. Denga harigadzirwe mushure mekufa. Denga harigadzirwe neusimbe hwepfungwa, nekusaita chero chinhu, nekurema, nekungoti nguva isipo, kana kurota uchiseka uchimuka, uye pasina chinangwa. Denga rakagadzirwa nekufunga zvevako uye nevamwe zveMweya nehunhu hwakanaka uye rinowanikwa nebasa rakaperera kusvika kumagumo akadaro. Mumwe anogona kufarira matenga chete iye chaakange avaka iye; Denga remumwe harisi denga rake.
Mushure mekufa kwemuviri wayo wepanyama, pfungwa dzinotanga basa rekubvisa neizvo zvido zvakashata uye zvepanyama, zvakaipa, zvishuvo, uye kusarudzika zvinopiswa kana kugurwa. Izvi ndizvo zvinhu zvinokanganisa uye kunyengera uye nekuzvinyengedza nekuzvinyengedza nekuzvikanganisa uye nekurwadziwa uye kutambudzika paive nehupenyu hwepanyama uye zvaidzivirira kubva pakuziva mufaro chaiwo. Zvinhu izvi zvinofanirwa kuiswa parutivi uye kupatsanurwa kubva kuitira kuti pfungwa dzive nokuzorora uye mufaro, uye zvirarame maererano neizvo zvaishuvira, asi zvaitadza kuzadzisa muhupenyu hwepanyama.
Denga rakadikanwa kune yakawanda pfungwa sekurara uye kuzorora ndeye muviri. Kana zvishuwo zvese zvepamoyo nepfungwa zvakabviswa uye zvapera nepfungwa, zvinobva zvapinda kudenga izvo zvanga zvakazvigadzirira pachazvo.
Denga iri mushure mekufa harigone kunzi pane pane imwe nzvimbo kana nzvimbo pano pasi. Pasi rinozivikanwa kune vanhu vakafa muhupenyu hwepanyama harigone kuonekwa kana kunzwiwa kudenga. Denga harisi kungganhurirwa nehurema hwacho hunoyerwa ne pasi.
Mumwe anopinda kudenga haatungamirwe nemirairo inoronga mafambiro uye zviito zvemuviri wepanyika. Iye amene ari kudenga kwake haafambi, kana kubhururuka, kana kufambisa nesimba. Haadyi chikafu chinonaka, kana kunwa zvinotapira. Haanzwe kana kuburitsa mimhanzi kana ruzha pazviridzwa zvine tambo, zvematanda kana simbi. Iye haaone matombo, miti, mvura, dzimba, zvipfeko, sezvo zviripo pasi pano, uye haaoni mafomu epanyama uye chimiro chechinhu chero chiri pasi. Masuo eparera, migwagwa yejaspi, chikafu chinotapira, zvinwiwa, makore, zvigaro zvevachena, mbira uye makerubhi angave ari pasi pano, haawaniki kudenga. Mushure mekufa mumwe nemumwe anovaka yake yake kudenga uye anoita saiye mumiririri wake. Iko hakuna kutenga nekutengesa zvinhu kana chero zvigadzirwa zvepasi, sezvo izvi zvisiri kudiwa. Kufambiswa kwebhizinesi hakuitwe kudenga. Bhizimusi rese rinofanira kuverengerwa pasi pano. Acrobatic feats uye zvinoshamisa zvinoitika, kana zvakapupurwa, zvinofanirwa kuvonekwa pasi. Hakuna vanoita vakadaro vakarongedzwa mukutonga kwedenga, uye hapana kana mumwe angazofarira kuratidzwa kwakadaro. Iko hakuna kubatana nezvematongerwo enyika kudenga, sezvo pasina zvigaro zvekuzadza. Iko hakuna masekete kana zvinamato kudenga, seumwe neumwe ikoko akasiya chechi yake pasi. Uye hakuzowanikwe mafashoni uye munhu akasarudzika wevanhu vakasarudzika, nekuti nzvimbo dzakapfekwa, silika uye zvigaro izvo munharaunda yakapfekedzwa hazvibvumirwe kudenga, uye miti yemhuri haigone kutakurwa. Iyo veneer uye machira uye mabhanhire uye zvese zvakashongedzwa zvakadaro zvinofanirwa kunge zvakabviswa munhu asati apinda kudenga, nekuti vese vari kudenga vari sezvavari uye vanogona kunge vachizivikanwa sezvavari, pasina kunyengera uye kuvanza kwenhema.
Mushure mekunge muviri wenyama waiswa parutivi, pfungwa yaive isiri yemuviri inotanga kuzvikanda uye nekuzvisunungura kubva kumakara ezvishuwo zvavo zvenyama. Sezvo icho chinokanganwa uye chisingazive pamusoro pazvo, pfungwa dzinozvishingisa zvishoma nezvishoma uye kupinda mukati mayo nyika yekudenga. Izvo zvakakosha kudenga kune mufaro uye kufunga. Hapana chinobvumirwa icho chinodzivirira kana kukanganisa kukanganisa. Hapana kupokana kana kutsamwiswa kwemhando ipi neipi kunogona kupinda kudenga. Iyo nzvimbo yekufara, iyo nyika yekudenga, haina kunyanya kunaka, inoshamisira kana kushamisira zvekuti inoita kuti pfungwa dzinzwe dzakadzikira kana kuti dzisiri munzvimbo. Uyezve denga harina hanya, rakajairika, risingafarire kana monoton zvekuti rakabvumira pfungwa kuti itore pachayo seyakaremara uye isina kukodzera kune iyo nyika. Denga nderepfungwa rinopinda, zvese izvo zvinokwanisa kupa iyo pfungwa (kwete pfungwa) iyo huru uye yakazara yakazara mufaro.
Mufaro wedenga kuburikidza nekufunga. Inofungidzirwa ndiye musiki uye mufashoni uye muvaki wedenga. Inofunga zvekushandisa uye inoronga kugadzwa kwese kwedenga. Kufunga kunoyemura vamwe vese vanotora chikamu mudenga reumwe. Mufungo unotarisisa zvinoitwa, uye nemabatirwo azvakaitwa. Asi pfungwa chete ndedziya dzemufaro dzinogona kushandiswa mukuvaka denga. Manzwiro anogona kupinda mudenga repfungwa chete kusvika padanho rekuti akaitwa akakosha kumufaro nekufunga. Asi pfungwa dzinoshandiswa saka ndedzemhando yakacheneswa kupfuura manzwi ehupenyu hwepasi uye dzinogona kungoshandwa chete kana dzikapesana nenzira yekufunga nedenga. Pfungwa kana pfungwa dzinobata nenyama hadzina chikamu kana nzvimbo kudenga. Saka ndedzipi mhando dzenhema idzi dzedenga pfungwa? Iwo pfungwa dzakagadzirwa nepfungwa kwechinguvana uye chechino chiitiko, uye usazogara.
Kunyangwe pasi risingaonekwe kana kunzwiwa sezvariri pasi, zvakadaro pasi rinogona kunge riri uye rinoonekwa pamwe nepfungwa kana pfungwa dzepfungwa dziya, mukufambira mberi kwechakanaka, dzave nehanya nenyika. Asi pasi ririko kudenga inove imwe yakakodzera ivhu uye haizivikanwe nepfungwa mukati mayo chaiwo mamiriro ezvinhu neakaomarara iyo yaanogadzika pamiviri yemuviri. Kana kufunga kwemunhu kwaive nehanya nekugadzira pekugara nekushongedza dzimwe nzvimbo dzepasi, nekuvandudza magariro epasi uye nekuzvishandura kuti zviwane zvakanakira iye nevamwe nevamwe, kana nekuvandudza muviri. hunhu uye nepfungwa mamiriro munzira chero ipi, ipapo pasi kana nharaunda dzepasi iye zvaanga ane hanya naye, zvaigona, kudenga kwake, kuwanikwa mukukwana kukuru, nepfungwa yake, uye pasina zvipinganidzo uye zvipingaidzo iye akanetsana muhupenyu hwepanyama. Mufungo anotora nzvimbo yetsvimbo yake yekuyera uye kure chinonyangarika mukufunga. Zvinoenderana nepfungwa yake yakanaka yekutanga nepasi, ndizvo zvichaitawo azive kudenga; asi pasina kubatika kweanoshanda uye pasina kuedza kwekufunga, nekuti iyo pfungwa inounza kuzadzikiswa yakaumbwa pasi uye inongozviraramira kunze kudenga. Mufungo kudenga kudenga ndiko kunakidzwa uye mhedzisiro yekufunga kwakaitwa pasi.
Pfungwa hadzina hanya nenyaya yezvitambi kunze kwekunge chinyorwa ichi chakanangana nechero pakanaka pasi pano uye chakatariswa pasina zvakawandisa kuzvifarira. Anogadzira akafunga pasi pano aine chekuita neimwe mota kana chimbo chekutungamira nechinangwa chekuti aite mari kubva mukugadzira kwake, angadai, kana achipinda kudenga, angakanganwa uye kuve asingazive nezve basa rake pasi pano. Panyaya yemugadziri aive akakwana kugadzira mota yakadaro kana chimbo nechinangwa chekuvandudza mamiriro everuzhinji kana kubatsira vanhu vekunetseka, aine chinangwa chevanhu, uye kunyangwe iye iye aifunga nezvekugadzira. uye nekugadzira chinongedzo nechinhu chekuratidza chimwe chinhu chisinganzwisisike - chero bedzi kufunga kwake kwaisava nemukuru kana kutonga kwekufunga kuita mari-iro basa raifungirwa kuti raizove nenzvimbo mudenga rekutanga uye iye aizozadzisa zvakaringana izvo yakanga isingakwanisi kuziva pasi.
Kufamba kana kufamba kwepfungwa mudenga rayo kudenga hakuitwe nekufamba zvakaoma kana kushambira kana kubhururuka, asi nekufunga. Mufungo inzira inopfuura nayo pfungwa kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Iyo pfungwa inogona kuita izvi inoitika muhupenyu hwepanyama. Munhu anogona kutakurwa achifunga kusvika kunzvimbo dziri kure kwazvo dzepasi. Muviri wake wenyama unogara uripo, asi pfungwa yake inofamba kwaanoda uye nekukurumidza kwepfungwa. Zviri nyore kwaari kuti azvifambise achifunga kubva kuNew York kuenda kuHong Kong, sezvazviri kubva kuNew York kuenda kuAlbany, uye haisisiri nguva inodikanwa. Munhu akagara muchigaro chake anogona kusisipo mukufunga uye kushanyira nzvimbo dziri kure kwaakange aripo uye angangorarama pamusoro pezvezviitiko zvekare zvekare. Kuputa kunogona kusimuka akapfeka mbabvu pahuma yake apo anoita basa rakakura. Chiso chake chinogona kuve chakafukidzwa neruvara sezvo iye, achidzokera kumashure, akatsamwa humwe hunhu, kana kuti ungatende kune ashen pallor paanopfuura neimwe njodzi huru, uye nguva yese iyi anenge asingazive muviri wake nenzvimbo dzakapoteredzwa kunze kwekunge rapindirwa nekuyeuka, kana kudzoka kudzoka kwemufungo.
Sezvo murume angaite uye agadzirise mukufunga zvinhu izvo zvaakasangana nazvo kuburikidza nemuviri wemuviri pasina kuziva muviri wake wenyama, pfungwa, zvakare, dzinogona kuita uye nekurarama zvakare zvichirarama mudenga zvichienderana nemabasa adzo nepfungwa. vachiri pasi. Asi pfungwa dzichabva dzave dzakaparadzaniswa kubva pane zvese zvinotadzisa pfungwa kuti dzisave nemafaro. Muviri unoshandiswa nepfungwa kusangana nehupenyu hwepasi muviri wenyama; muviri unoshandiswa nepfungwa kuwana mufaro waro kudenga ndiwo muviri waro wokufunga. Muviri wenyama wakakodzera kuhupenyu uye chiitiko mune hwenyama. Muviri uyu wepfungwa unoumbwa nepfungwa panguva yehupenyu uye unotora chimiro mushure mekufa uye unogara kusakareba kupfuura nguva yekudenga. Mumuviri uyu wekufunga pfungwa dzinorarama achiri kudenga. Muviri wekufunga unoshandiswa nepfungwa kuti ugare mukati mayo wedenga nekuti nyika yekudenga ndeyemafungiro, uye inogadzirwa kufunga, nemuviri wekufunga unoita sezvisikirwo mudenga rayo nyika sezvainoita muviri wenyama munyama nyika. Muviri wenyama unoda chikafu, kuchengetwa mune wemuviri wenyama. Pfungwa dzinodawo chikafu kuti chengetedze muviri wayo wekufunga kudenga kwenyika, asi chikafu chinogona kunge chisiri chenyama. Chikafu chaishandiswa ndechekufunga uye ndidzo pfungwa dzaivaraidzwa nguva yepfungwa dzaive mumuviri vachiri pasi. Iye murume aiverenga achifunga uye achifungidzira nezvebasa rake kana ari pasi, iye nekudaro, akagadzira chikafu chake chekudenga. Basa rekudenga nemafungiro ndidzo chete mhando dzekudya dzinogona kushandiswa nemweya wepanyika yayo yekudenga.
Pfungwa inogona kuziva kutaura uye mimhanzi kudenga, asi chete kuburikidza nekufunga. Rwiyo rwehupenyu ruchaperekedzwa nemumhanzi wemapereji. Asi rwiyo rwacho runenge rwakanyorwa nemafungiro arwo uye zvinoenderana nekwavo pfungwa parinenge riri pasi pano. Mimhanzi ichave ichibva munzvimbo dzedenga dzepfungwa dzedzimwe pfungwa, sezvo ivo vachiwirirana.
Pfungwa hadzibate dzimwe pfungwa kana zvinhu kudenga, sezvo zvinhu zvepanyama zvinobata nemimwe miviri yepanyika. Kudenga kwaro muviri wefungwa, iri muviri wepfungwa, unobata mimwe mitumbi nekufunga. Mumwe anoziva kubata nekubatana kwenyama chete nezvimwe zvinhu kana kubatwa nenyama nenyama, haazokoshese mufaro uyo unogona kupihwa kune wepfungwa kubva kubatwa kwepfungwa nepfungwa. Mufaro unowanikwa, pamwe, nekubatika kwepfungwa nepfungwa. Mufaro haumbofa wakawanikwa nekudyidzana nenyama nenyama. Denga haisi nzvimbo yakasarudzika kana nzvimbo umo pfungwa imwe neimwe yakavanzika mune yega isina wedenga. Hermits, ari ega anogara pasi uye aifungidzira avo vane pfungwa dzave dzakanetseka zvakanyanya pakufunga ivo pachavo kana zvinetso zvisinganzwisisike, vanogona kunakidzwa nedenga ravo, asi hazviwanzo kuitika kuti pfungwa dzinogona kana kusabvisa zvese zvisikwa kana zvimwe pfungwa kubva kudenga rake rekudenga.
Denga rinogarwa nemunhu mushure mekufa mune imwe pfungwa yemunhu. Naizvozvi akange akakomberedzwa uye mariri akararama mukati mehupenyu hwomuviri. Munhu haazive nemamiriro ake epfungwa, asi anozviziva mushure mekufa, uyezve kwete semamiriro ekunze, asi sokudenga. Anofanira kutanga apfuura, kukura kunze, kwemamiriro ake epamoyo, kureva kuti, kuenda mugehena, asati apinda kudenga rake. Munguva yehupenyu hwepanyama, pfungwa dzinovaka denga rake mushure mekufa dzinoramba dziri mumamiriro ake epfungwa. Ivo vari, kune hukuru hwakakura, vasingagare kunze. Denga rake rine mukusimudzira, kurarama kunze uye kuzadzikiswa kweizvozvo zvakanak pfungwa; asi nguva dzese, ngazvirangarirwe, ari mumamiriro ake ezvinhu. Kunze kwemuchadenga uku kwakapihwa hutachiona hunobva paakavakirwa
Pfungwa yega yega ine uye inogara mune yayo yega yedenga, sekufunga kwega kwega kunogara mumuviri wayo wemuviri uye nemweya wayo chaiwo mune yepasirese. Pfungwa dzese mumatenga adzo dzakatarwa dziri mukati medenga guru renyika, zvimwechetewo sevanhu zvirimo mukati meenyama yepanyika. Pfungwa hadzisi kudenga kumusoro sezvo vanhu vari nenzvimbo uye nenzvimbo pasi pano, asi pfungwa dziri mune iyo mamiriro nemaonero ayo uye kunaka kwepfungwa dzayo. Pfungwa inogona kuzvivharira imo mudenga rayo mukati medenga guru renyika uye isisabatanidzwe nedzimwe pfungwa dzesimba kana simba, zvimwechetezvo sekuzvivhara kwemunhu kubva pasi kana achinge azvifunga kubva pasangano revanhu. Pfungwa dzega dzega dzinogona kutora chikamu mudenga reimwe pfungwa kana nedzimwe pfungwa dzese kusvika padanho rekuti pfungwa dzadzo dzakafanana uye kusvika padanho rekuti pfungwa dzadzo dzinoenderana, zvakadarowo sevanhu pasi pano vane pfungwa dzakasunganidzwa vakasunganidzwa pamwe nekunakidzwa nokubatana kwepfungwa. kubudikidza nepfungwa.
Nyika yekudenga inovakwa uye yakagadzirwa nemifungo, asi yemifungo yakadaro chete iyo inozounza mufaro. Pfungwa dzakadai sekuti: akandibira, anondiuraya, anondinyomba, akandinyepera, kana, ndine godo naye, ndinomuitira godo, ini ndinomuvenga, haagoni kutamba chero chikamu kudenga. Izvo hazvifanirwe kufungidzirwa kuti kudenga inzvimbo isina kusimba kana nyika nekuti yakagadzirwa nezvinhu zvisina chokwadi uye zvisingabvumike sepfungwa dzemunhu. Mufaro mukuru wemunhu pasi pano, kunyange zvidiki, unouya kuburikidza nemafungiro ake. Iwo iwo madzimambo emari epasi haawani mufaro nekungove kwavo goridhe, asi mukufunga kwekutora kwavo, uye nemasimba avo anotevera. Mukadzi haawani kuwana hushoma hwemufaro kubva kuzvimedu zvizhinji zvezvinonhuwirira zvinoshandiswa mukugadzira-gown uye kubva mukupfeka kweiyo gown, asi mufaro wake unobva nepfungwa yekuti zvinomuita iye nekufunga kuti iyo inoraira kuyemurwa kubva kune vamwe. Kunakidzwa kwemutambi hakuzi muchigadzirwa chebasa rake. Iyo ndiyo pfungwa iyo inomira shure kwayo iyo yaanofarira. Mudzidzisi haanyatsofadzwa neicho chokwadi chekuti vadzidzi vanokwanisa kubata nemusoro maitiro akaoma. Kugutsikana kwake kuri mundangariro yekuti ivo vanonzwisisa uye vanozoshandisa izvo zvavanenge vadzidzira. Mufaro mudiki unowanikwa nemunhu pasi pano, anowana kuburikidza nemafungiro ake chete, uye kwete kubva pakuwanikwa chaiko kana kubudirira. Panyika pfungwa dzinoratidzika kunge dzisingagadzirisike uye dzisiri dzechokwadi, uye zvinhu zvinoita sezvinhu chaizvo. Kudenga zvinhu zvekunzwisisa zvakanyangarika, asi pfungwa ndidzo chaidzo. Mukushaikwa kwemafomu akasimba ezvekutaura uye muhupo uye huchokwadi hwezvinyorwa zvekufunga, pfungwa dzinonzwisisika kupfuura mufaro kupfuura pfungwa dzemunhuwo zvake kuburikidza nepfungwa dzake paanenge ari pasi.
Vese avo vakapinda mune yedu pfungwa vachiri pasi, kana avo isu pfungwa yedu yakanangisirwa kuti tiwane imwe yakanakira, mune fungidziro vanove varipo uye vabatsire kuita mudenga redu. Saka shamwari dzemumwe hadzivharwe kunze kwedenga. Hukama hunogona kuenderera mberi nepfungwa iri mudenga rayo, asi chete kana hukama hwakamira hwakaringana uye husati hwasvika pakadai sezvwenyama uye hwenyama. Hwenyama haina chikamu kudenga. Iko hakuna kufunga nezvebonde kana kuita kwepabonde kudenga. Dzimwe pfungwa dzirimo mumuviri wenyama, dzinowanzosanganisa pfungwa ye "murume" kana "mukadzi" nezviito zvepanyama, uye zvingave zvakaoma kune vakadaro kufunga murume nemukadzi vasina zano rehukama hwavo. Izvo hazvisi zvakaoma kuti vamwe vafunge murume kana mukadzi, sevashandi vanoita basa kune chimwe chinhu chakajairika kana sechipo cherudo rusina udyire uye kwete rwepanyama. Kana pfungwa dzakapusa dzakapatsanuka kubva mumuviri wayo wenyama uye yapinda mudenga rayo, iyo, zvakare, haizovi nefungidziro yebonde nekuti ichave yakaparara kubva mumuviri wayo wenyama nemadyiro ayo epfungwa uye ichave yakacheneswa kubva mukuora kwayo. zvido.
Amai vacho vanoita kunge vakaparadzaniswa nerufu kubva kumwana wavo vanogona kusangana zvakare kudenga, asi sezvo iro denga rakasiyana nenyika, saka naiwo amai nemwana vachange vakasiyana kudenga kubva kune zvavaive vari pasi pano. Amai avo vaiona mwana wavo nekuzvida chete, uye vachiona mwana iye sepfuma yake, haadi mwana akadaro uye haangagone kuva naye kudenga, nekuti mafungiro eudyire ekuti ane pfuma haazivikanwe uye kusiyiwa kudenga. Amai vanosangana nemwana wavo kudenga vane chimiro chakasiyana chendangariro kune iye anofungidzirwa kwaari, kupfuura mai vanozvida vanobereka mwana wavo wepamoyo, iye achiri munyama. Pfungwa dzinotonga dzamai vasina udyire ndezverudo, kubatsira uye kudzivirira. Pfungwa dzakadaro hadzina kuparadzwa kana kudziviswa nerufu, uye amai vaive nepfungwa dzakadaro kumwana wavo vachiri pasi pano vacharamba vainevo kudenga.
Hapana kana pfungwa yemunhu inogumira kana kuvharirwa mumuviri wayo wenyama uye pfungwa dzese dzemunhu dzave nemweya inaina baba vayo kudenga. Iyo pfungwa iyo yakasiya hupenyu hwepasi uye ikapinda mudenga rayo, uye iyo pfungwa dzayo dzakanakisa dzakanangidzirwa kana kunetseka nevaya vaiziva pasi pano, inogona kukanganisa pfungwa dzeavo vari pasi pano kana pfungwa dziri pasi dzikasvika kumusoro kwakakwana mukufunga.
Mufungo wemwana unotakura amai kuenda naye kudenga hakusi kwechimiro nehukuru. Muhupenyu hwepanyama aiziva mwana wake semucheche, semwana kuchikoro, uye gare gare zvimwe sababa kana amai. Kuburikidza nebasa rose remuviri wayo wepanyama pfungwa yakanaka yemwana wake haina kuchinja. Kudenga, kufunga kwamai kwemwana wavo hakurevi muviri wenyama. Mufungo wake ndewemhando chete.
Mumwe nemumwe achasangana neshamwari dzake kudenga kusvika padanho rekuti iye anoziva shamwari idzo pasi pano. Panyika shamwari yake inogona kunge iine sindano kana ziso remwedzi, bhatani kana mhino yehombodo, muromo wakaita seye Cherry kana kuti banga, mundiro kana chinya chebhokisi, musoro wakavezwa puru kana musoro wakafanana nebara, kumeso kunge hatchet kana squash. Chimiro chake chingave kune vamwe vakaita senge Apollo kana satan. Izvi zvinowanzo kuvezwa uye zvigadzirwa izvo shamwari dzake dzinopfeka pasi. Asi izvi zvakavanzika anozobayiwa kana achiziva shamwari yake. Kana akaona shamwari yake kuburikidza nemisangano yepasi pano achamuziva iye kudenga rekudenga pasina avo maficha.
Hazvina musoro kutarisira kuti isu tinofanira kuona kana kuva nezvinhu kudenga sezvatinazvo pasi, kana kunzwa kuti kudenga kunenge kusingadiwi kunze kwekunge tava navo. Munhu haawanzo kuona zvinhu sezvavari, asi sezvaanofunga kuti ndizvo. Haanzwisisi kukosha kwezvinhu zvake kwaari. Izvo zvinhu kunge zvinhu mukati mazvo zviri zvepasi uye zvinoonekwa kuburikidza nemitezo yake yemuviri wepfungwa. Pfungwa chete nezvezvinhu izvi dzinogona kuendeswa kudenga uye chete pfungwa dzakadai dzinogona kupinda kudenga sezvo zvichizopa mufaro wepfungwa. Naizvozvo iwo iwo murangariro mumwechete uyo waifunga mumutumbi wepasi pano haangatambura kurasikirwa nekupa izvo zvisingakwanise kupa mufaro wawo. Avo isu vatinoda pasi pano, uye kuda iye anodikanwa kuti mufaro wedu, havazotambure nekuti kutadza kwavo uye zvakaipa zvavo hazvina kutorwa nesu tichifunga kuenda kudenga. Isu tinozovafarira zvechokwadi kana isu tichigona kuva navo mumafungiro pasina zvikanganiso zvavo uye sezvatinofunga nezvavo seizvo zvibodzwa. Iko kutadza kweshamwari dzedu kunopesana nekutadza kwedu pachedu, uye mufaro weushamwari unokanganiswa uye kusviba. Asi kushamwaridzana kusine gwapa kunoonekwa zviri nani kudenga rekudenga, uye isu tinovaziva zvechokwadi sezvavari pane nekuwoneka nehururu hwepasi.
Izvo hazvigoneke kuti pfungwa dziri kudenga dzigone kutaurirana neumwe ari pasi, kana kuti kune yepanyika kutaurirana neumwe kudenga. Asi kutaurirana kwakadai hakuitwe nemhando ipi neipi inogadzira psychic phenomena, kana kunobva kune zvemidzimu kana zvinotaurwa nemasvikiro se “nyika yemidzimu” kana kuti “nyika yezhizha.” Pfungwa dziri kudenga kwete "midzimu" izvo zvinotaurwa nemweya. Nyika yekudenga yepfungwa haisi iyo yemweya nyika kana zhizha remasvikiro. Pfungwa dziri mudenga rayo hadzipinde kana kutaura kuburikidza nemuzhizha, kana pfungwa iri kudenga inozviratidza mune chero nzira yakakura kune wemidzimu kana kushamwari dzayo dziri pasi pano. Kana pfungwa dziri kudenga dzakapinda mune zhizha kana kuzviratidza kune wemidzimu kana kuzviratidza muchimiro chemuviri uye kubatana maoko nekutaura kushamwari dzayo mumuviri wenyama, ipfungwa iyoyo inofanira kuziva nyika, uye nezvenyama. uye kurwadziwa, kutambudzika kana kusakwana kweavo vaitaura navo, uye mutsauko weizvi waizokanganisa nekuvhiringidza mufaro wake uye nedenga rinenge rave kumagumo kweiyo pfungwa. Pfungwa dzichiri kudenga mufaro wayo haungakanganiswe; harizive nezve chero zvakaipa kana kukanganisa kana kutambudzika kweavo vari pasi, uye harisi kuzosiya denga raro kudzamara nguva yaro yedenga yasvika.
Pfungwa dziri kudenga dzinogona kutaurirana nemunhu ari pasi pano kuburikidza nekufunga nekufunga chete uye nekufunga kwakadai uye kutaurirana kuchagara kuri kwehunhu uye hwakanaka, asi usambofa warayira iye ari pasi pano nzira yekuwana kurarama, kana kugutsa chishuwo chake kana kupa kungonyaradza kwekushamwaridzana. Kana pfungwa kudenga kudenga dzichitaurirana neumwe pasi pano, kazhinji kazhinji kuburikidza nemafungiro asiri iwo anoratidza kuita kwakanaka. Izvo zvinogoneka, zvakadaro, kuti zano iri rinogona kuperekedzwa nemufungo weshamwari iri kudenga, kana izvo zvinokurudzirwa zvakasanganiswa neunhu kana neichi chaive chiri basa rake pasi. Kana kufunga kweiyo kudenga kuri kubatwa nepfungwa dziri pasi, mufungo haungazviratidze kuburikidza nechero chiitiko. Iyo kutaurirana ichave kuburikidza nekufunga kwega. Munguva dzekusuwa uye nemamiriro akakodzera, murume ari pasi pano anogona kutaurira mafungiro ake kune mumwe kudenga. Asi kufunga kwakadaro hakuzove nekutsvina kwepasi uye kunofanirwa kuve mukuenderana neyakanakisa uye inoenderana nekufara kwepfungwa kudenga, uye kumira musina hukama nehunhu hwemufi. Kana kutaurirana pakati pepfungwa kudenga uye nepfungwa yepanyika kutakurwa, pfungwa kudenga hadzizofunge nezve chimwe chinenge chiri pasi, kana murume ari pasi pano haazofunge nezvemumwe kudenga. Kukurukurirana kunogona kuve chete kana pfungwa dzakabatana kune mumwe nemumwe, kana nzvimbo, chinzvimbo, zvinhu, zvisingakanganisi pfungwa uye kana iyo pfungwa iri yepfungwa nepfungwa. Pane izvozvo munhuwo zvake haabate pamuviri. Kana chirairo chakadai chikaitwa, nguva nenzvimbo hazvioneke. Kana chirairo chakadai chakabatwa pfungwa kudenga hazviburuke pasi, kana munhu haakwire kudenga. Kudyidzana kwakadaro kwepfungwa kuri kuburikidza nepfungwa yepamusoro yeiyo yepanyika.
Nekuda kwekusiyana kwemaonero uye hunhu kana simba remifungo uye zvishuwo zvevanhu, kudenga hakuna kufanana kune vese vanoendako. Mumwe nemumwe anopinda uye anozviona uye anozvikoshesa sekuzadzika kwezvaakashuvira kuti afare. Musiyano wemifungo uye zvinangwa zvevanhu zvakapa mukana kune zvinomiririra zvekuverenga nekuremerwa kwematenga akasiyana ayo munhu anonakidzwa nawo mushure mekufa.
Kune matenga mazhinji sekunge pane pfungwa. Asi hazvo zvese zviri mukati meumwe wedenga. Mumwe nemumwe anogara kudenga kwake mune mufaro pasina chero nzira yekuvhiringidza nayo mufaro wevamwe. Mufaro uyu unogona, kana ukayerwa, munguva uye maererano neruzivo rwepasi, zvinoita sekunge kusingaperi kusingaperi. Mukutaura chaiko kwepasi kunogona kunge kuri kupfupi. Kune iye kudenga nguva ichave isingagumi, iri kutenderera kwakazara kwechiitiko kana kufunga. Asi nguva ichaguma, kunyangwe kumagumo kusazoita senge kune uyo kudenga kuri kumagumo emufaro wawo. Kutanga kwedenga rayo hakuna kuita kunge kamwe kamwe kana kusatarisirwa. Kupera uye kutanga kudenga kumhanya mukati meumwe neumwe, zvinoreva kupedzisa kana kuzadzika uye kukonzera kana kuzvidemba kana kushamisika sezvo mazwi aya anonzwisiswa pasi pano.
Nguva yekudenga sezvayakatemerwa nepfungwa dzakakodzera uye inoshanda isati yafa haisati yakareba kana ipfupi, asi yakakwana uye inopera kana pfungwa dzakazorora kubva kune basa radzo uye dzapera uye dzakasimudzira pfungwa dzayo dzakanakisa dzaisati dzaona pasi pano, uye kubva mukufungidzirwa uku kunosimbiswa uye kunozorodzwa nekuregedzwa kubva pakukanganwa kunetseka uye kusagadzikana uye nematambudziko zvaakasangana nazvo pasi pano. Asi kudenga kwedenga pfungwa hadziwane chero imwe ruzivo rwekuwedzera kupfuura zvaraive narwo pasi. Pasi ndiyo nhandare yehondo dzekutambudzika kwayo uye chikoro mairi chichiwana ruzivo, uye nepasi panofanira pfungwa kudzoka kuzopedzisa rovedzo yayo uye dzidzo.
Iyo yekunyora mumagazini yaJanuary ichave iri pamusoro peDenga repasi.